မနေ့ကနဲ့နောက်ဆုံးအပတ်သည် Fibo - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ မနေ့ကနဲ့နောက်ဆုံးအပတ်သည် Fibo
ယခင်နေ့နှင့်ယခင်တစ်ပတ်အလိုအလျှောက် Fibonacci အဆင့်ဆင့်ထောက်ပံ့.
အဆိုပါ core ကိုမနေ့ကသို့မဟုတ်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရဲ့ start နှင့်အဆုံးအဆတွက်ချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. စျေးကွက်၏တစ်ဦးကတပတ်မှာစတင် 17:00 IS (အမေရိကန်နိုင်ငံအရှေ့ UTC -5) တနင်္ဂနွေနေ့မှာ, စျေးကွက်သောကြာနေ့မှီတိုင်အောင်ဆက်လက် 17:00.
input parameters တွေကို:
startWeekDayOfWeek - ထိုရက်သတ္တပတ်၏ပထမဆုံးနေ့, 1 အရှေ့များအတွက်,7အနောက်များအတွက်
minTimeFrames - နိမ့်ဆုံးအချိန်အပိုင်းအခြား
maxTimeFrames - အများဆုံးအချိန်အပိုင်းအခြား
TimeRangeColor - အချိန်အကွာအဝေးလိုင်း
PriceRangeColor - စျေးနှုန်းအကွာအဝေးလိုင်း
PriceMarkColor - စျေးနှုန်းတန်ဖိုးကိုအမှတ်အသား
GoldenSectionColor - ရွှေအပိုင်းလိုင်း
Update ကို 2015.06.26:
showFibo - ပြပွဲရွှေအပိုင်း
init_YesterdayFibo, init_LastWeekFibo - ပြီးပြည့်စုံသောညွှန်ပြချက်စတင်ခြင်း. ကန့်သတ်ညွှန်းကိန်းတစ်ခါသာနနေပါတယ်, ရက်စွဲကိုပြောင်းလဲမမူလျှင်, ပစ်မှတ်အရာဝတ္ထုကိုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူရဲ့, ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ရွှေအချိုးအစား၏အချိုးအစားကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်.
Added ဖော်ပြချက်သတင်းအချက်အလက်များ(OBJPROP_TEXT) object တစ်ခုများအတွက်.
AUDUSDPro M30 အပေါ် YesterdayFibo:
AUDUSDPro h4 အပေါ် LastWeekFibo:
မနေ့ကနဲ့နောက်ဆုံးအပတ်သည် Fibo တစ် Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
မနေ့ကနဲ့နောက်ဆုံးအပတ်သည် Fibo သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
မနေ့ကနဲ့နောက်ဆုံး Week.mq4 သည် Fibo install လုပ်နည်း?
Fibo မနေ့ကနဲ့နောက်ဆုံး Week.mq4 များအတွက် Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှမနေ့ကနဲ့နောက်ဆုံး Week.mq4 များအတွက်မိတ္တူ Fibo / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
မနေ့ကများအတွက် Fibo ပေါ်မှာ Right ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံး Week.mq4
မနေ့ကနဲ့နောက်ဆုံး Week.mq4 သည် indicator Fibo သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ကနေမနေ့ကနဲ့နောက်ဆုံး Week.mq4 သည် Fibo ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?